Ama-High Tides Inverloch - I-Airbnb
Ama-High Tides Inverloch
I-i-townhouse ephelele ibungazwe ngu-Gael
U-Gael Ungumbungazi ovelele
Indlu yasedolobheni eyakhiwe ngobungcweti enezindawo ezivulekile zohlelo ngaphakathi nangaphandle, ezimele kahle ekuvakasheni okumnandi. Le ndawo yokuphumula esogwini itholakala phakathi nemizuzu engu-3 ukuhanjwa ngezinyawo ukuya ezindaweni zokudlela, amathilomu, izitolo kanye nebhishi.
Le townhouse inezindawo ezivulekile zohlelo ezihlanganisa indawo yokuphumula, ikhishi, indawo yokudlela kanye nekamelo lesibili elisakazeka emazingeni angu-3 mezzanine.
Ikamelo lokulala eliyinhloko linombhede omusha ontofontofo we-queen onamashidi okunethezeka anikezwe ukulala kahle ebusuku. I-TV iphinde inikezwe ekamelweni eliyinhloko.
Ikamelo lesibili, elisezingeni eliphezulu le-mezzanine, lihlanganisa imibhede emibili emincane elala abantu ababili/imibhede emikhulu elala umuntu oyedwa enamashidi anikeziwe, indawo engabandlululi yezingane noma abantu abadala.
Amathawula asegumbini lokugezela anikeziwe.
Kunamayunithi amabili ahlukanisiwe ohlelo lokushisisa/i-air conditioning kanye nompheki oxhunywe kusilingi wokunethezeka kwakho phakathi nezinyanga ezipholile nezifudumele.
Ikhishi linakho konke iketela, umshini wekhofi, i-toaster, uhhavini, isitofu, i-microwave, umshini wokuwasha izitsha kanye nefriji egcwele. Itiye lamahhala, ikhofi nezinto eziyinhloko ze-pantry ziyatholakala.
Indawo yokuphumula entofontofo inosofa omusha sha wezihlalo ezingu-4 one-TV, i-Wi-Fi yamahhala nesidlali se-DVD.
Kunezindawo ezimbili zokuzijabulisa zangaphandle ongazijabulela. Igceke eliphansi linezindawo zangaphandle nengadi eshisayo. Iminyango emibili esuka endaweni yokudlela ivuleka kuvulandi omkhulu onendawo ethokomele yangaphandle kanye ne-BBQ kagesi, elungele ukunambitha umoya wolwandle ngobusuku obufudumele.
Izingubo ezincane zaseYurophu ezine-ayina ukuze kube lula kuwe.
Indawo eyodwa yokumboza imoto enikezwe endaweni enendawo yokupaka yamahhala engekho emgwaqweni nayo iyatholakala eduze ne-.
4.99 · 106 okushiwo abanye
Lahla okhiye bakho bezimoto njengoba sihlezi kalula eduze nebhishi, amathrekhi okuhamba, inkundla yokudlala yezingane, amathilomu/ikhofi elihle, izindawo zokudlela, izitolo namasevisi.
Ngithanda ukunikeza izivakashi ubumfihlo, kodwa uma unanoma yimiphi imibuzo, ngijabule kakhulu ukuyiphendula.
UGael Ungumbungazi ovelele